यी हुन् राष्ट्र बैंकलाई नटेर्ने आठ वाणिज्य बैंक, परे यस्तो कारबाहीमा « Sansar News
यी हुन् राष्ट्र बैंकलाई नटेर्ने आठ वाणिज्य बैंक, परे यस्तो कारबाहीमा
८ कार्तिक २०७८, सोमबार १५:५४
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आफ्नो निर्देशन उल्लंघन गर्ने विभिन्न आठ वाणिज्य बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । तोकिएको अनिवार्य न्यूनतम नगद मौज्दात नगरेको पाइएसँगै अधिकांश बैंकहरुमाथि केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको हो ।
अनिवार्य न्यूनतम नगद मौज्दात नगरी कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुमा नेपाल बंगलादेश बैंक, प्रभु बैंक र हिमालयन बैंक रहेका छन् । तिनीहरुमध्ये हिमालय बैंकले मात्र गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमास (वैशाख–असार)मा मात्र दुई पटक गरि रु. ३० हजार जरिवाना तिरेको छ । त्यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकले पनि ३० हजार ३ सय २४ रुपैंयाँ जरिवाना तिरेको छ भने प्रभु बैंकले ३५ हजार ६ सय ९५ रुपैंयाँ जरिवाना तिरेको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा पहिलो र दोस्रो त्रैमास (साउन–पुष)मा सम्पत्ती शुद्धिकरण ऐन उल्लंघन गरेको कारण लक्ष्मी बैंकले २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ । त्यस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह नगरेको कारण स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले रु ५७ लाख ८४ हजार ६ सय १७ रुपैंयाँ जरिवाना तिरेको छ ।
पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा विभिन्न निर्देशनहरुको अवज्ञा गरेका कारण स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको एक मात्र बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।
तेस्रो त्रैंमास (माघ–चैत्र)मा सम्पत्ती शुद्धिकरण ऐन उल्लंघन गरेको विषयमा सिभिल बैंक कारबाहीमा परेको छ । सो बैंकले रु. १० लाख जरिवाना तिरेको छ भने बैंकका ऋणीसँग अप्रत्यक्ष करोबार गरेका कारण अध्यक्ष इच्छा राज तामाङ्लाई नसीहत दिईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै सोही त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन बिपरित बैंक र प्रभु मनि ट्रान्फरबिच कारोबार भएको पाईएकोले बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष देवीप्रकास भट्टचन, सिईओलगायत ७ जना सञ्चलकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
हेनुहोस् कुन बैंकलाई कस्तो कारबाही ?
राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्यको जरुरी- ढकाल